Kusukela ezikhathini zasendulo esetshenziswa diapering, futhi uma ngaphambili kwaba kuphela indlela ukubeka kuzalwa, manje umama osemusha has a lot of ezinye izinketho. Akufanele sibakhohlwe izinzuzo le ndlela, naphezu inani elikhulu izingubo ezinhle, iyatholakala ezitolo. Ukuze uqalise kungukuqonda ukuzimisela khulula futhi Friend swaddling. Eyokuqala yalezi ubhekwa ofanele kakhulu izingane.
Mahhala ingane ukushintsha ivumela imvuthu uzizwe uvikelekile, sengathi esizalweni sikamama. Ngokungafani iqine, ibuye enikeziwe ukuthola ukuma zemvelo. Kulokhu zakutyvanie obukhulu kakhulu kwandisa amathuba okweqile kanye ovimbela umoya ogcwele.
ukunyakaza Isilinganiso asebenzayo, ukukhala abukhali futhi ethusa ukwethuka basikisela ukuthi swaddling khulula izibaya azikakabi okwaziyo futhi kufanele usebenzise inguqulo luthe ukuqina. Kulokhu, kubalulekile engathandeki uma ingane ilele ngokuthula panties kanye undershirts.
Ewusana olusanda kuzalwa endaweni "umfece" ukhululekile ihamba kalula imilenze nezingalo, yokujwayela isimo imvelo engajwayelekile. Ngezinye izikhathi abazali abasha abhekene amadala isizukulwane umbono categorical mayelana indlela swaddling. Ngaphambili kwakucatshangwa ukuthi nale ukugoqa kungavimbela eguqa imilenze nokuma komzimba ayilungile. Kodwa eqinisweni akulutho nje liyinsumansumane, umntwana okhula kancane ngenxa yokuthi kwakunzima futhi kunyatheliswa ophoqelelwe, akuyona inkinga njalo isikhundla ukhululekile ngaye.
Ukunyakaza uvumele ukuqaphela amakhono abo, ufunde mayelana nezwe kanye umzimba wakho siqu, kuyilapho izinyane akesabi ukuphonsa izandla njengoba swaddling khulula izinsana kancane kukhawulela Isikhala uyakhumbula kokuba esibelethweni. Ngakho yashesha isikhathi ukuzumeka, ngenxa yalokhu, le ndlela ngokuvamile esetshenziselwa ukulala.
Ngakolunye uhlangothi kuyafaneleka multifunction imbeleko. Awukwazi ukhathazeke ukuthi pipsqueak Uvuke ngenxa yamakhaza, okuyinto ebaluleke kakhulu esikhathini ekwindla-ubusika. Kulokhu, amasudi nezinye izingubo ngokushesha yaba ncane ukwedlula inabukeni, ngakho ngokukhetha ubukhulu kwesokudla, ungasebenzisa eyodwa isethi kusuka ekuzalweni kuya ezinyangeni eziyisithupha.
Ngokusho ukuziphatha kwengane, ungakwazi ukunquma ukuthi ingabe ukusebenzisa swaddling. Uma wesaba ngezandla zabo, ubuthongo ukubuyisa nokuvuka kaningi kakhulu, ungazama ukulahla izingubo evamile. Kid izonethezeka ku ethokomele "umfece" lendwangu esithambile. Kulokhu, ukuhlukumeza kwemisipha ithoni futhi wakhipha ingane umbhikisho bethi khulula negcwele diapering asifanele. Futhi, ukuze ugweme okweqile Akubalulekile mpahla imvuthu egumbini hot njengoba ubusuku nemini.
Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe imiklamo. Indlela elula ukukubona ngenkathi ubuka ividiyo ukuqeqeshwa. Okubaluleke kakhulu, ingane ingakha ume ukhululekile, okungukuthi, agobe imilenze emadolweni. Le ngxenye engenhla inabukeni kungenzeka ezingeni esiswini, kuleso simo imilenze zihlobene kuphela, noma entanyeni.
Ukungakwazi kwamagesi abamba ukushisa emkhathini ngenxa kutungeletela emoyeni iyona Inzuzo enkulu inqubo enjalo. Njengoba yaziwa, swaddling khulula igcina zonke izingxenye emaphashini, ukuqina ekuseni kanye nokuqinisa amasosha omzimba. Kulokhu, umntwana angakwazi ukulala esimweni elula, isibonelo ku esiswini. Libuye uzinake kungenzeka ukuthuthukiswa emihle motor amakhono, thinta nokuvinjelwa dysplasia. I ukuhamba ngenkululeko kuqinisekiswa namanabukeni ezithambile nje kuphela kodwa futhi izimvilophu izindwangu zemvelo.
Kunezindlela ezimbili eziyinhloko zokushintsha mat yilezi:
izingalo nemilenze ibe nenkululeko efanayo nokunyakaza;
a inabukeni kangangokuthi kuphela imilenze zihambisana.
diapering Mahhala: imithetho
Kuyadingeka ukusakaza ngokucophelela zonke izinhlobo emphethweni ku indwangu, njengoba isikhumba obucayi olusana Kulula kakhulu ukulimaza. Kubalulekile ukuthi kwesilevu kanye nekhala zazihlale evulekile ukuvimbela nobunzima ukuphefumula. Futhi-ke anehlathululo kuma lokushisa ekhethekile, ngaleyo ndlela okweqile ingane hypothermia babe yingozi nakakhulu. Uma efulethini epholile, ungasebenzisa inhlanganisela namanabukeni ezimbili (flanelnoy futhi chintz) noma ezengeziwe ukugqoka umntanakho isudu mncane noma iqoqo ngezilayidi, futhi blouses.
Kuyinto engathandeki ukugqoka isigqoko endlini, ngoba kukhubaza le thermoregulation zemvelo. Ngezinye izimo okusezingeni eliphezulu lokushisa ukhetho engcono kungaba ukotini noma kulirka ukuthi ungavele afihle ingane. It is nhlobo ukulungisa inabukeni usebenzisa izikhonkwane ngenxa ingozi yokulimala.
Engathandeki isikhumba ukuxhumana noboya noboya izinto. Kuhle kufanelekile namanabukeni futhi izingubo ngezinto ezithambile imvelo, pre-wageza powder akhethekile ironed.
Lapho ngeke akwenze ngaphandle swaddling
Uma uthi nhlá kungase kubonakale sengathi namuhla diapering Friend noma khulula isibe asihlobene ngenxa ezihlukahlukene enkulu izingubo for abancane, namanabukeni futhi esebenza, kanye namanye amathuluzi lula ukuphila kukamama abasha. Kodwa musa sebekubeke senqabe namanabukeni, njengoba kubalulekile kwalezi zimo:
Lapho ingane lungakwazi ukuzola. Ngokokuqala ngqá ngemva kokuzalwa umlenze esabisa umntwana ngenxa okungazelelwe, ukunyakaza senhlekelele, kuyilapho esibelethweni, abazange kumenze yimuphi kabi. Mahhala swaddling ebanzi ukuhlinzeka ubuthongo elizolisayo kanye imvuthuluka efudumele. Ngakho abakwazi ukhathazeke ukuthi ukunyakaza sezimiso aphule iholide.
Indlu yangasese kuqala. Kukholakala ukuthi uma ingane zihambisana inabukeni, akesabi yamanzi futhi bazizwe bephephile.
Lapho efeza izinqubo zokwelapha. Ngokwesibonelo, kulungele esiswini ngesikhathi colic usebenzisa Ukushisa pads, kuba lula kakhulu uma sisisebenzisa ukuzizuzela inabukeni. Kukhona nezinye izinto eziningi, ezingemnandi, kodwa kudingeka umntwana.
Ukuze izinqubo yokuhlanzeka. Kunzima kakhulu ukusebenzisa iso lehla ukuhlanza ekhaleni nezindlebe, uma ingane ngokucophelela umelana. Swaddling kuleli cala ukuze kukhawulwe ukuhamba kwesikhathi edingekayo ukuze afeze zonke izenzo.
izimo njalo lapho namanabukeni asihambisani futhi ukukhuthaza ukwakheka inabukeni amawala futhi ukuqubuka, nge njalo emoyeni namanabukeni kwenzeka ukuthi ngesivinini ukuphulukisa amanxeba.
Esimeni ukungabaza ngokuthi isidingo ekushintsheni mat akudingekile ukuba siqondiswe kuphela abangane izeluleko izihlobo ezikhulile, ngoba zonke izingane zihlukile futhi ngamunye kubo kudinga indlela ekhethekile.
Ukushintsha ithebula kubalulekile uma uhlela diapering isikhathi eside. Namuhla e-izitolo kungatholakala njengoba izingcezu agcwele ifenisha, kanye ukusonga, yiziphi kulula ukuthatha uhambo noma ukuhambisa ngokukhululekile endlini. I kabanzi atholwe kakhulu umbophi kokuba swaddling ebhodini. Uyosusa umthwalo kamama emuva, ivumela ukunakekelwa lula umntwana futhi emva ebhodini akusadingeki, kungaba zisuswe futhi wasebenzisa kuphela umbophi yokugcina.
Kukhona ezihlukahlukene enkulu namanabukeni, ezivame kakhulu kukho okulandelayo yilezi:
ezimvilophini, ukuqinisekisa swaddling khulula;
yefulaneli ejwayelekile futhi Calico;
I-izibaya lapho imilenze namanje evulekile;
terry Hooded esetshenziswa emva kokwelashwa kwamanzi.
Inombolo akhethiwe kuye ngokuthi ukusetshenziswa alahlwayo noma namanabukeni gauze. Okuningi namanabukeni ngosuku kwanela uma usebenzisa namanabukeni. Kwelinye icala, kufanele kube khona okungenani 20 izingcezu enikeziwe ukugeza nsuku zonke.
Mahhala swaddling imilenze It akanayo Izimo, kuncike zonke zokukhwabanisa yokuhlanzeka, ukuhambisana kanye ukusetshenziswa akukho isikhathi esingaphezu kwezinyanga eziyisithupha. Ngaphezu kwalokho, omama ekunakekeleni ingane ukugxilisa zokuxhumana close futhi zijabulise futhi angeke kudingeke isimiso sansuku zonke.
Ngenxa swaddling Friend kungavimbela ezihlukahlukene nezifo. Ngeshwa, okuphambene. Cases pneumonia zivamile kakhulu ezinganeni ngubani njalo zihambisana swaddling izingubo.
Ungenza ngaphandle swaddling. Konke kuncike usana, umuntu akakwazi ukulala ngaphandle kwalo, futhi abanye nje ungayeki wena bopha.
swaddling Tight yilona lokuvikela umlenze ugobile. Uma lokhu kuyiqiniso, khona-ke zonke izingane ezizalwayo e-USSR, kwakuyodingeka imilenze iqonde kahle.
Abazali abasha ngokwabo kumelwe acabangele izinzuzo nezingozi swaddling nosana futhi bazikhethele ukhetho best. Kodwa iqiniso liwukuthi ukuthi imvuthuluka phakathi sihlale siphapheme kufanele lizwakale linemfudumalo sakhe, induduzo kanye bakwazi ngokukhululekile ukuhambisa imilenze nezingalo.
Ngaphezu khulula, futhi elulele swaddling Friend, okubandakanya ukusetshenziswa inabukeni ezimbili ezinkulu. Inhloko ingane ithatha ikhava hood kusukela ingxenye engenhla inabukeni futhi umzimba zihambisana uvalwe kuwo. Isicelo samuntu ezinjalo ngokuhlakanipha ubuthongo ukubuyisa futhi esimweni overstimulation.
swaddling zokwelapha esimisiwe wezingane kuphela izinkomba ezithile. Empeleni, njengoba umusa ukwelashwa kanye nokuvimbela hip dysplasia.
Ngo zakutyvanii ingxenye anga kuphela niguquke imilenze noma izibambo. Okunye izingxenye zomzimba Ungahambisa ngokukhululekile, ngoba imbozwe lutho. Ngamunye okukhethwa ethulwa ngenhla kunezinzuzo zako kanye nebubi futhi kufanelekile ezimweni ezithile.
Akriderm RK - sifinyeto umkhiqizo